Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Dalxiiska » Sidee uga badbaadaa bahal dugaag ah oo ku soo weerara?
Safarka Dalxiiska • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn kartid si aad uga fogaato weerarka xayawaanka laakiin inaad ogaato inaad isdejiso ama aad la dagaallanto waa furaha! ”
Maraykanku waa dhul khatar ah marka ay timaaddo weerarrada dilaaga ah ee dadka duurjoogtu ku qaadaan. 20kii sano ee la soo dhaafay, 520 qof ayaa lagu dilay Texas, Gobolka ugu halista badan Mareykanka marka laga hadlayo weerarada xoolaha ee dilaaga ah.
Kooxda ciyaarta Dibadbax ayaa shaaca ka qaaday kuwaas oo gobolladu ay ka dhaceen weerarrada xayawaanka ee ugu dhimashada badnaa laga soo bilaabo 1999 illaa 2019, oo ay la socoto xayawaanka kuwaas oo leh sababay dhimashada ugu badan waxayna bixiyeen talooyin khabiir ku saabsan waxa la sameeyo marka la soo weeraro xayawaan halis ah.
U diyaargarow liistada waxa aad samayn karto marka lagu soo weeraro si aad noolaansho uga baxdo.
Tobanka Gobol ee ugu dhimashada badan Maraykanka marka laga hadlayo weerar lagu qaado xayawaan duurjoog ah ayaa ah
Texas oo ay ku dhinteen 520
Waqooyiga Carolina 180
Tobanka Dawladood ee Maraykanka ugu nabdoon marka ay timaaddo in xayawaan la weeraro waa
Waqooyiga Dakota: 0
Jasiiradda Rhode: 0
Koonfurta Dakota: 22
Xayawaanka ugu dhimashada badan ee dila dadka Mareykanka ah ee ku safraya duurjoogta ayaa ah
Bear -dabaysha: 10
Carl Borg waa tifaftiraha Outforia waana sahmiyaha aadka u xiiseeya waqtiga firaaqada. Wuxuu leeyahay xoogaa talo khabiir ah oo ku saabsan waxa la sameeyo marka uu soo weeraro xayawaan khatar ah.
“In lagu soo weeraro xayawaanku waa cabsi laakiin aad bay u khatar badan tahay marka aad u socoto dalxiisyo ku teedsan Waqooyiga Ameerika, sidaa darteed waxaan doonaynay inaan hubinno inaad ogaato taxaddarrada aad samaynayso haddii aad waligaa dareento hanjabaad ka mid ah xayawaankan halista ah.
Taladayda ugu weyn ee qof kasta oo u socda dhacdooyinkan meelahan laga yaabo inaad kula kulanto xayawaan duurjoog ah waa inaad diyaargarowdaa. Waxaan mar walba kugula talin lahaa inaad baaritaan ku samayso xayawaanka ugu caansan aagga aad booqanayso, maaddaama xayawaannada kala duwan ay ula jeedaan borotokoollo kala duwan marka weerar la kulmo. Ogaanshaha farqiga u dhexeeya orso bunni ah iyo madow tusaale ahaan waxay badbaadin kartaa noloshaada! Markaad dareemayso hanjabaad ka timid orso madow, waa inaad naftaada ka dhigtaa mid aad u weyn intii suurtogal ah, gacmahaaga kor u qaad madaxaaga oo samee buuq badan. Markaad haysato orso bunni ah waa inaad aad u xasilloon tahay oo aad u gaadhaa buufin orso.
Xoolaha biyaha sida sharks -ka waa inaad had iyo jeer ka fogaataa dabaasha qaladka ah maxaa yeelay tani way soo jiidan kartaa, si kastaba ha ahaatee, haddii ay bilaabaan inay ku soo weeraraan - u isticmaal wax hub ahaan, ama feeraha iyo cagahaaga - oo beegsada indhahooda iyo cirridkooda.
Alligators waxay ku kala duwan tahay, had iyo jeer waxaa wanaagsan inaad iska ilaaliso wabiyada dhoobada leh, haddii lagu soo weeraro, isla markiiba la dagaallama laakiin ha iska caabbin in la rogrogo maxaa yeelay taasi waxay kugu sababi kartaa inaad laf jabto.
Beeshu waa khatar caadi ah oo ku jirta dariiqyo badan oo socod lagu maro Waqooyiga Ameerika, oo nooc kasta waa in loola dhaqmaa si ka duwan. Saddexda nooc ee orsada ee ku yaal Waqooyiga Ameerika, waxaad u badan tahay inaad ku dhex ordo orso madow ama orso bunni ah, maaddaama orsooyinka dabayshu runtii kaliya laga helo waqooyiga Arctic Circle.
Haddii aad la kulanto orso madow, markaa waxaad haysataa fursad aad uga fiican inaad ka fogaato dhaawac halis ah ama dhimasho. Beerka madow wuxuu ka yar yahay bahasha buniga ah, inkastoo magacoodu yahay, waxay ku yimaadaan midabbo kala duwan. Haddii aad la kulanto mid, waa inaad naftaada u weyneysaa sida ugu macquulsan, gacmahaaga kor u qaad madaxaaga oo samee buuq badan. Saaxiibbadaada socodku waa inay sameeyaan wax la mid ah iyagoo isu meeleeya sida ugu dhow ee suurtogalka ah. Tani waxay u soo bandhigi doontaa odayga cabsi gelinaysa odayga waana laga yaabaa inay sababto inay kaligeed si fiican kaaga tagto. Si kastaba ha ahaatee, tani micnaheedu maahan xeelad nacasnimo ah, waana inaad had iyo jeer ku siddaa buufin orso meel sahlan oo la gaadhi karo markaad soo gasho waddanka bahasha, iyo geesaha hawada ayaa si gaar ah waxtar ugu yeelan kara inaad ka fogeyso orso madow.
Haddii aad ku dul dhacdo orso bunni ah, markaa waa inaad u dhaqantaa si ka duwan sidii hore. Waa inaad si tartiib tartiib ah oo deggan u gaarto buufinta orsadaada intaad weli joogto intii suurtogal ah. Markaad diyaar u ahaato ka -hortaggaaga inaad isticmaasho, bilow inaad ka fogaato bahasha si tartiib ah oo xakameysan, samee dadaal kasta si aadan uga nixin xayawaanka, adigoo ku hadlaya cod deggan, deggen, iyo kalsooni leh. Haddii bahasha cawlan ay adiga kuu soo baxdo, ujeeddadaadu tahay buufintaada orso oo ka sarraysa madaxa uunlaha oo sii qiyaas buufin dheer leh.
Waa kuwan tilmaamo ku saabsan sidaad dib ula dagaallami karto marka uu ku soo weeraro xayawaan khatar ah
Sida weerar kasta oo xayawaan ah, had iyo jeer waxaa ugu wanaagsan in la isku dayo oo laga fogaado la kulanka shark haddii ay suurtogal tahay. Tani way adkaan kartaa maadaama ay adag tahay in lagu arko dabaasha biyaha hoostooda. Si kastaba ha noqotee, haddii mid la arko, waa inaad jidkaaga u dhigtaa sida ugu macquulsan xeebta. Ka fogow dabaasha qalafsan iyo daadinta, maxaa yeelay hawshani waxay soo jiidan doontaa dareenka sharkiga.
Haddii uu ku soo weeraro shimbir badeed, waxaa lagugula talinayaa inaad ku weerarto si xoog leh intaad awooddo, adoo adeegsanaya wax kasta oo aad u adeegsan karto hub ahaan, ama adoo adeegsanaya feeraha iyo cagahaaga haddii loo baahdo. Waa inaad beegsataa indhahooda iyo gilgiladooda, maadaama labaduba ay yihiin aagag xasaasi u ah sharkiga. Sanka sharkiga ayaa sidoo kale la sheegay inuu yahay meel daciif ah oo ka hor istaagi kara inay weerar dambe qaadaan.
Haddii lagu qaniino, ama aad dareento uun wax lugtaada ku dabaalanaaya, waa inaad sida ugu dhakhsaha badan oo deggenaansho ah uga soo baxdaa biyaha oo aad cadaadis saartaa meelaha dhiig -baxa ah. Waa inaad markaa wacdaa adeegyada gurmadka oo aad naftaada u heshaa gargaar caafimaad sida ugu dhakhsaha badan.
Way adkaan kartaa in la arko masaska, maadaama ay u muuqdaan inay ku dhuuntaan cawska dheer, geedka hoostiisa, ama meelaha dillaacsan iyo meelaha daboolan. Waxa kale oo aad la kulmi kartaa abeesooyin marka aad dhex marayso biyaha, taas oo macnaheedu noqon karo inaadan ogaanin in lagu qaniino ilaa ay goori goor tahay. Xaaladdan oo kale, waa inaad had iyo jeer hubisaa wixii xagasho ah si aad u hubiso inaysan dhab ahaantii qaniinyo abeesadu ahayn.
Qaniinyada abeesada waxaa lagu garan karaa laba calaamadood oo dalool oo ku yaal boogta. Calaamadaha kale waxaa ka mid ah guduudasho iyo barar ku wareegsan daloollada, xanuun daran, lalabo iyo matag, aragga oo dhib ah, neefsashada oo ku adkaata, kabuubyo ama dareemid xarkaha addimadaada, iyo dhareerka oo kordha iyo dhidid.
Haddii lagu qaniinay, isku day in aad is dejiso oo aad xasuusato midabka iyo qaabka masku haddii ay suurtogal tahay, maadaama ay tani kaa caawinayso in si dhakhso ah loo garto noocyada iyo daaweynta ku habboon. Sidoo kale, degenaanshaha oo weli dhibbanaha qaniinyadu sii ahaado, ayay sii dheeraan doontaa in sun kasta ay jidhka ku faafto. Waa inaad wacdaa adeegyada gurmadka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, oo dhibbanaha qaniinyada fadhiiso ama jiifso markaad qaniinyada ka hoosayso heerka wadnaha. Qaniinyada waa in lagu nadiifiyaa biyo saabuun diiran sida ugu dhakhsaha badan oo lagu daboolo maro qalalan oo nadiif ah.
Ha isku dayin inaad nuugto sunta. Tani waxay xaaladda uga sii dari kartaa oo sumayn kartaa qof labaad. Nabarka waa in keligiis lagu daayaa meel ka baxsan dhaqidda fudud iyo labiska ee kor ku faahfaahsan. Sidoo kale waa inaadan isticmaalin wax kasta oo aalkolo ah ama cabitaanno kafeyn leh, oo aad iska caabbiso rabitaanka inaad barafka ku dhajiso boogta.
Weerarada yaxaaska ee ku dhaca bini -aadamka aad bay u yar yihiin, waad ku farxi doontaa inaad ogaato. Sida ugu wanaagsan ee looga fogaado yaxaasyada waa in laga fogaado wabiyada iyo deegaannada qoyan ee ay ku nool yihiin. Haddii lagugu soo weeraro biyaha, yaxaasku wuxuu isku dayi doonaa inuu ku qaniino ka dibna ku dhex rogrogo biyaha. Waa inaadan isku dayin inaad ka hortagto rogid, maxaa yeelay taasi waxay kugu sababi kartaa inaad jabiso lafo, ama xitaa lafdhabartaada, taasoo kugu reebaysa naxariista gator.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad had iyo jeer u dulqaadataa intaad awooddo. Maadaama aadanuhu aysan ahayn ugaarsiga dabiiciga ah ee xatooyada, waxay inta badan sii dayn doonaan bini'aadamka oo wax aad ugu adkeeya. Waa inaad beegsataa indhahooda iyo sankooda haddii ay suurtogal tahay, laakiin iska ilaali inaad isku daydo inaad abaalmariso afkooda maadaama xooggooda qaniinyadu aad u awood badan tahay waxayna noqon doontaa dadaal lumin. Sidoo kale waa inaadan waligaa ciyaarin adigoo dhintay, maadaama aysan haysan sabab ay ku sii daayaan.
Haddii aad dhulka kula kulanto yaxaas, waa inaad had iyo jeer isku daydaa inaad cararto haddii ay suurtogal tahay. In kasta oo yaxaasyadu si dhaqso leh ugu ordi karaan masaafo gaaban, haddana ma sii wadi karaan xawaaraha. Marka, sharadkaaga ugu fiican ayaa ah inaad dhigto masaafada u dhexeysa adiga iyo gator -ka intii suurtagal ah.
Haddii aad la kulanto cougar, markaa waa inaad u dhaqantaa si la mid ah sidii inaad la kulantay orso madow. Ka dhig naftaada mid u muuqata sida ugu badan ee suurtogalka ah oo samee dhawaaqyo waaweyn adigoo ku qaylinaya ama afuufaya foorida ama hoonka hawada. Waa inaad wajahdaa cougar -ka, oo aadan dhabarka u jeedin, laakiin iska ilaali inaad si toos ah isha ula xiriirto maxaa yeelay tan waxaa loo fasiran karaa dabeecad dagaal badan waxayna ku kicin kartaa cougar -ka inuu weeraro.
Waa inaadan isku dayin inaad ka cararto cougar, maadaama ay kicineyso dareenka bahalnimada ee xayawaanka si uu u eryo ugaadhsiga. Cougars sidoo kale waa xayawaan aad u dheereeya, sidaa darteed isku day kasta oo lagu dhaafo midna wuxuu noqonayaa mid aan waxtar lahayn. Taa bedelkeeda, haddii cougarku isku dayo inuu ku soo weeraro, waa inaad kula dagaallanto si kasta oo suurtogal ah. Ku dhufo cougar wax kasta oo aad hirgelinayso oo aad gacanta ku hayso, ama isticmaal feedhahaaga haddii ay khasab kugu noqoto, sida cougars -ku ogaa inay ka hortagaan gardarrada. Waxaad kaloo isticmaali kartaa buufin basbaas ama buufin orso si aad iskaga celiso cougar dagaal badan.
Weerarada Wolf -ku waxay ku dhacaan aadanaha waa dhacdo aad dhif u ah, badanaana, waxay dhacdaa oo kaliya marka yeeygu uu yahay rabid ama haddii uu caadaystay bini -aadamka. Haddii kale, waxay caadi ahaan dhacaan marka yeey weerarto eyga, kaas oo uu u arko inuu yahay hanjabaad dhuleed, oo mulkiiluhu isku dayo inuu soo farageliyo.
Haddii aad la kulanto yeey, waa inaad naftaada ka dhigtaa mid u eg mid dheer oo weyn, si tartiib tartiib ah gadaal u sii wad adigoo isha ku haya. Dhabarkaaga ha u jeedin yeyda ama ha ka cararin, maxaa yeelay tani waxay kicisaa dareenka xayawaanka si uu u eryo. Haddii eey kula joogto markaad la kulanto yeey, u keen xayawaankaaga cidhibta oo is dhig labada xayawaan dhexdooda. Tani waa inay soo afjarto kulanka.
Haddii yeygu uusan dib u laaban oo uu muujiyo astaamaha gardarada, sida qaylinta, oohinta, dabada kor u taagaysa, ama kor u qaadida joodariga, waa inaad samaysaa qaylada ugu badan ee suurtogalka ah oo aad wax ku tuurto. Tani waa inay rajaynaysaa inay ka horjoogsato yeyda inay aad ugu dhowaato. Si kastaba ha noqotee, haddii ay ku soo weerarto, waa inaad si aad ah ugu dagaallantid sida ugu macquulsan si weerarkaagu uusan ugu muuqan mid u qalma dadaalka.
Fikirka ugu dambeeya…
Si kastaba ha ahaatee, waxaa fiican inaad isku daydo oo iska ilaaliso xaaladdan marka hore. Weeraro badan oo xayawaan ah ayaa ka tagaya qol yar oo ay ku noolaadaan marka laga reebo inay rajaynayaan in xayawaanku noqdo mid aan danayn. Haddii aad ku maqan tahay duurka, aad uga fog ilbaxnimada ama adeegyada gurmadka, wax aad u yar ayaa la samayn karaa haddii lagu qaniino, lagu mudh -saaro, ama si kale u dhaawaco xayawaanka duurjoogta ah ee gardarada ah.
Sidaa darteed, waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaad raacdo talada khubarada duurjoogta deegaanka ama mas'uuliyiinta baarkinka si aad u hubiso inaad ka ilaaliso bahalaha gobolka. Talada guud ee sahamiyaha dabeecadda ayaa ah inaad koox -koox u safarto, si aan laguu tilmaamin bartilmaameed fudud, oo aad mar walba raad -raacdo. Tani waxay muhiim u tahay ma aha oo kaliya inaad ilaaliso naftaada, laakiin sidoo kale inaad ilaaliso deegaannada dabiiciga ah adigoo khalkhal gelinaya intii suurtogal ah.
Sidoo kale waa inaad ogaataa in carruurta la geeyo meelaha lagu yaqaan inay leeyihiin xayawaanka duurjoogta ah ee halista ah waxay ku gelin doontaa khatar aad u saraysa in la beegsado sababtuna tahay muuqaalkooda oo aad u yar oo hanjabaad ah.
Waxaad arki kartaa talo buuxda iyo cilmi baaris adoo gujinaya halkan.